Tag: lazan'ny marika | Martech Zone
Tag: lazan'ny marika
Alakamisy, Desambra 7, 2017 Alakamisy, Desambra 7, 2017 Douglas Karr
Niresaka momba ny tombony maro azo avy amin'ny fampidirana chat mivantana ao amin'ny tranonkalanao amin'ny iray amin'ireo podcast marketing izahay. Aza hadino ny mihaino! Mahaliana ny resaka mivantana satria manome porofo ny statistika fa tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fanakatonana orinasa bebe kokoa izy io, fa afaka manatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ihany koa ao anatin'izany. Mila fanampiana ny mpanjifa fa, raha ny hevitro, tsy te hiresaka amin'ny olona izy ireo. Miantso, mivezivezy hazo an-telefaona, miandry am-pitoerana ary avy eo manazava
Talata, Septambra 26, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny fanaovana vola amin'ny famoahana boky dia tsy dia mora araka ny fahitana azy. Topazo maso ireo famoahana lehibe rehetra dia hahita fahasasarana tsy mitovy am-polony izay mangataka amin'ny mpamaky ianao mba hiala. Ary matetika izy ireo. Na izany aza, ny fanonerana vola dia ratsy ilaina. Tiako na tsia, mila mandoa ny faktiora eto aho ka mila mandanjalanja tsara ny sponsors sy ny doka. Ny faritra iray tianay hatsaraina dia ny faritry ny faritany monja
Raha miaiky zavatra momba ny fandaniana roa-polo taona amin'ny marketing aho, dia ny tena marina fa tsy azoko tsara ny fiantraikan'ny marika amin'ny ezaka marketing rehetra. Na dia toa fanambarana mahatsikaiky aza izany, dia satria ny fihenan-tsofina amin'ny fanaovana marika na ny ezaka tsy mampino amin'ny fanitsiana ny fahatsapana ny marika dia sarotra lavitra noho ny noeritreretiko azy. Raha manao sary, dia mitovy ny a